I-Anodized Aluminium Sheet Factory - China Abakhiqizi beAluminium Aluminium Sheet, abahlinzeki
Ishidi le-Aluminium elijiyile
Isigaba esilandelayo esihle kakhulu ngosayizi we-aluminium osayizi abajwayelekile. Usayizi wamashidi ajwayelekile we-aluminium afaka ukujiya kwensimbi yensimbi ye-aluminium, ububanzi nobude. Lapho i-oda ishidi le-aluminium alloy, amakhasimende angacela ngokuqinile le datha. Ngokuvamile, ngokuya ngosayizi we-aluminium sheet mm, amashidi e-aluminium angahlukaniswa abe yizinhlobo ezilandelayo:
Amapuleti we-Precision Container Aluminium
Ubukhulu beshidi le-aluminium elijiyile ngokuvamile lingaphezulu kwe-2.0mm. 3mm aluminium ipuleti uhlobo ovame kakhulu umkhiqizo. Ku-aluminium sheet gauge, i-10 gauge aluminium sheet (2.5mm) kanye ne-11 gauge aluminium sheet (3.0mm) yimikhiqizo emele. Futhi ishidi le-aluminium elijiyile eli-1 8 ngokuyisisekelo lifana ne-aluminium sheet 3mm.
Ishidi le-Aluminium le-Golden Brushed
I-Anodized Aluminium ukugqwala nokulimala okusho ukuthi ngeke ishabalale, i-chip, i-peel noma i-flake. I-Anodizing inqubo esetshenziselwa ukukhulisa ukushuba kwesendlalelo semvelo se-oxide ebusweni bezingxenye zensimbi. Kwandisa ukugqwala nokugqoka ukumelana, futhi ngenkathi kwenziwa inqubo i-anodized aluminium surface ingafakwa imibala ngemibala eminingi ehlukene.
Ishidi le-Aluminium elihlanganisiwe
Amaphaneli we-Aluminium composite (ACP), enziwe nge-aluminium composite material (ACM), angamapaneli ayizicaba aqukethe amashidi ama-aluminium amabili ambozwe ngekhoyili ahlanganiswe nengqikithi engeyona eye-aluminium. Ama-ACPs asetshenziselwa njalo ukugqokiswa kwangaphandle noma ubuhlakani bezakhiwo, ukwahlukanisa, nezimpawu.
I-Aluminium Ikhoyili & Isithando Somlilo
Ngaphandle kwezinhlobo ezahlukahlukene zama-aluminium alloys, izakhiwo zezinto ze-aluminium alloy nazo ziyizinto ezibalulekile, ikakhulukazi izakhiwo zemishini yama-aluminium alloys. Ukuhlolwa kokusebenza kuyingxenye ebalulekile ekusetshenzisweni kwama-alloys ajwayelekile e-aluminium. Lesi sigaba sihlola izakhiwo ezahlukahlukene zemishini nezokucubungula zemikhiqizo ye-aluminium alloy.